राजीनामा स्वीकृत गराउन स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीको याचना, मन्त्रालयमा दिइन् पुनर्विचार निवेदन – Health Post Nepal
२०७६ मंसिर २२ गते १८:२३
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा. पुष्पा चौधरीले राजीनामा स्वीकृत गरिदिन सरकारसमक्ष पुनः निवेदन दिएकी छिन् । यद्यपि, विद्यमान अवस्थामा उनको राजीनामा स्वीकृतिबारे पुनर्विचार हुने अवस्था नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसअघि राजीनामा दिएर स्वीकृत नहुँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जागिर सुरु गरेकी डा. चौधरीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो ।
विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले कुनै पनि पदमा जागिर तथा फेलोसिपका लागि दरखास्त दिनुअघि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, डा. चौधरीले राजीनामा दिएर स्वीकृत नभई १ नोभेम्बरदेखि नै डब्लुएचओको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । उनले डब्लुएचओको आकर्षक पद ‘पी फाइभ’को जिम्मेवारी भारतमा सम्हालेकी थिइन् ।
स्वीकृतिविना जागिर सुरु गरेकाले कानुनतः सरकारले फिर्ता बोलाउन तथा कारबाहीसमेत गर्न सक्ने भएपछि उनको डब्लुएचओको आकर्षक जागिर र सचिव पद दुवै धरापमा परेको छ । त्यसैले उनी अहिले जुनकुनै मूल्यमा राजीनामा स्वीकृत गराउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको स्रोतको भनाइ छ । यसैक्रममा उनले केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर राजीनामा स्वीकृत गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । मन्त्रीसँगको भेटपछि उनले लिखित रूपमै राजीनामा स्वीकृतिका लागि पुनः निवेदन दिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताइएको छ ।
१८ असोज ०७५ मा सरकारले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसलाई अटेरी गर्दै डा. चौधरी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । अदालतबाट सरुवा फिर्ताको आदेश ल्याएर स्वास्थ्यमै हाजिर भएसँगै सरकारलाई अटेरी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत डा. चौधरीसित रुष्ट भएको बताइन्छ । त्यसपछि उनलाई कमजोर बनाउन स्वास्थ्यमा दुईवटा सचिवको व्यवस्था गरिएपछि डा. चौधरी जिम्मेवारीमा खुम्चिँदै आएकी थिइन् । सरकारसित तिक्तता कायमै रहिरहँदा उनले डब्लुएचओमा जाने निर्णय लिएकी थिइन् । तर, सरकारले बाटो नखोलिदिएपछि उनी समस्यामा परेकी हुन् ।
राजीनामा दिएर सम्पर्कविहीन भएकी डा. चौधरी सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया बढाउँदा ‘यता न उता’को हुने खतरा बढेपछि अहिले जेजसरी भए पनि राजीनामा स्वीकृत गराउन लागिपरेको स्रोतको भनाइ छ । १७ कात्तिमका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. चौधरीको राजीनामा अस्वीकृत गरी मन्त्रालयलाई जानकारी पठाएको थियो । तर, राजीनामा अस्वीकृत भएको पत्र नबुझी उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । उनको सेवाअवधि अझै २ वर्ष बाँकी छ । सरकारले विनास्वीकृति डब्लुएचओको जागिरमा हाजिर भएका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा डा. चौधरी फिर्ता बोलाइन तथा पेन्सनसमेत नपाउने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्तीमा पर्न सक्नेछिन् ।